काठमाडौँ । मस्तिष्क मानव शरीरको एक महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील अङ्ग हो । मस्तिष्कले नै शरीरको सम्पूर्ण भागलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्छ । मानिसले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा मस्तिष्कको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । मानिस सफल /असफल हुनका लागि सकारात्मक सोच हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि स्मरण शक्ति बलियो हुनुपर्छ । स्वस्थ मस्तिष्कका लागि भोजनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
तपाईँले खानु भएको खानाले तपाईँको मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ । जसले स्मृति र एकाग्रता जस्ता विशिष्ट मानसिक कार्यहरू सुधार गर्न सक्दछन्। स्मरण शक्ति ह्रास हुनबाट बचाउनको लागि स्वस्थ जीवनशैली हुनुपर्छ । यस्तै योग, ध्यान, प्राणायाम जस्ता विधिले पनि मस्तिष्कको कार्य सञ्चालनलाई सही राख्छ ।
हल्दी र यसको सक्रिय कम्पाउन्ड कर्क्यूमिनसँग बलियो एन्टी–इन्फ्लेमेटरी र एन्टिऑक्सिडन्ट लाभहरू हुन्छन्, जसले मस्तिष्कलाई मद्दत गर्दछ । अनुसन्धानमा यसले डिप्रेसन र अल्जाइमर रोगका लक्षणहरूलाई कम गरेको छ।
७. ग्रिन टी : एन्टीअक्सिडेन्ट तत्वले भरपुर ग्रिन टीले सम्झना शक्ति बढाउन मद्दत गर्छ । यसमा पोलिफिनोल तत्त्व पाइन्छ, जसले स्मरण शक्ति अझै बढाउँछ । दैनिक दुई कप ग्रिन टी नियमित सेवनले स्मरण शक्ति बढाउन निकै मत गर्छ ।
यस्तै विभिन्न खानाले तपाईँको दिमाग स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। केही खानाहरू, जस्तै फल र तरकारी, साथ साथै चिया र कफीमा एन्टिआक्सीडन्ट छ । जसले तपाईँको मस्तिष्कलाई क्षतिबाट बचाउन मद्दत गर्दछ। नट र अण्डाहरूमा पोषण तत्त्व हुन्छन् जसले मेमोरी र मस्तिष्कको विकासलाई समर्थन गर्दछ। मस्तिष्कको स्वास्थ्यलाई समर्थन गर्न र सतर्कता, मेमोरी र मुडलाई बढवा दिन सकिन्छ । रणनीतिक रूपमा तपाईँको भोजनमा यी खाद्य पदार्थहरू समावेश गर्नु जरुरी छ ।
अभिभावक भएर यस्तो गल्ती त गर्नुभएको छैन नि ?
ब्लड सुगरको बेलैमा परीक्षण गरौँ : वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्राडा कोजु (भिडिओ)
त्रासका बीच मनाइयो गाईजात्रा (तस्बिरहरू)
योगमा जोडिएका नेपाल‚ चीन र भारत
आमा बन्दै गरेकी अभिनेत्री ऋचालाई सबैको साथ
रामदली गाउँदै, मकै गोड्दै [भिडियो]
यसरी बच्न सकिन्छ कोभिड–१९ बाट : डा. हरिप्रसाद पोखरेल
सन्तुलित आहार खानुहोस्, अस्पताल धाउनु पर्दैन